asphalt | RayHaber
Waddo Kale oo Lagu Aado Shirka Kartepe Asphalted; Dowlada hoose ee Kocaeli, oo bixisa dayactirka iyo hagaajinta jidadka waaweyn iyo jidadka si loogu adeego muwaaddiniinta, ayaa ka dhigeysa waddooyinka kale mid raaxo leh. Kartepe oo ka socota Degmada Pazarçayırı [More ...]
Izmit Marina halkaasoo doomaha kalluumeysiga iyo makhaayadaha ay ka xumaadeen Kocaeli Magaalo-weynaha Magaaladu dammaanad qaaday ka dib markii labada ganacsade iyo wejiga muwaaddinka wejiga ka qosleen. Muuji ku qanacsanaanta ganacsiyada dartood qashin daadinta [More ...]
Dowladda Hoose ee Magaalada Kocaeli, degmada Izmit Yahya Kaptan Xaafadda Demoqraadiyadu waxay qabaneysaa dayactirka wadooyinka iyo hagaajinta shaqada. Hawlaha ay qabato waaxda cilmiga sayniska, kooxdu waxay sameyaan boodhadh asphalt ah inta lagu gudajiro [More ...]
Doorashooyinka Maarso 31, "Waxaan mudnaanta siin doonaa safka dambe," khudbadda cajiibka ah ee Duqa Magaalada Izmir ee Magaalada Tunc Soyer, Yamanlar'a wuxuu u tegey inuu dib u eego shaqadii loo ballanqaaday. Deganeyaasha xaafadaha oo wadooyinkooda ay xireen İZBETON [More ...]
Mezitli Afar Hubka oo Asphalted ah
Dowladda Hoose ee Magaalada Mersin waxay sii wadaysaa inay ka shaqeyso sidii ay u haqab tiri lahayd baahiyaha muwaadiniinta meelo kala duwan oo magaalada ah isla markaana dib u cusbooneysiin iyo horumarin ugu sameyn doona Mersin. Macnaha guud, labadaba miyi iyo magaaloba [More ...]